Lavazza Tiny Mashiinka Espresso - Joornaalka Naqshadeynta
Mashiinka Espresso Mashiin yar oo espresso ah oo saaxiibtinimo ah ayaa gurigaaga u keenaya waayo-aragnimo qaxwo qafiican oo asal ah. Naqshadeynta ayaa si farxad leh u leh Badda Dhexe - oo ka kooban dhismeyaasha aasaasiga ah ee aasaasiga ah - u dabaaldega midabada iyo ku dabaqidda luqadda naqshadeynta Lavazza ee dusha sare iyo faahfaahinta. Qolofka ugu weyn waxaa laga sameeyay hal gabal wuxuuna leeyahay dusha jilicsan laakiin si sax ah loo xakameeyo. Crest-ka dhexe wuxuu ku daraa qaab dhismeedka muuqaalka muuqaalka horena wuxuu ku celcelinayaa mawduuca siman ee had iyo jeer laga helo badeecada Lavazza.
Magaca mashruuca : Lavazza Tiny, Magaca naqshadeeyayaasha : Florian Seidl, Magaca macmiilka : Lavazza.
Mashiinka Espresso Florian Seidl Lavazza Tiny